april 2021 – www.cisaleey.com
tirs. jun 7th, 2022
Xafiiska Qaramada Midobay ee Soomaaliya ayaa rajo ka muujiyay wada hadalada u socda madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa dowlad gobaleedyada dalka . QM ayaa sheegtay in ay dhiira gelineyso Kulamada…
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa shaacisay in 24 saac ee la soo dhaafay cudurka COVID-19 laga baaray 1176 ruux. Warbixinta ayaa sheegtay in la diiwaan geliyey 160 bukaan cusub oo la…
Dowladda Soomaaliya ayaa taageero u muujisay boqor Cabdallaha Urdun kadib tallaabada lagu xiray walaalkii Amiir Xamza bin Xuseen oo lagu eedeeyay in uu qalalaase iyo qas ka abuuri rabay halkaas…
Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabayay Haabiil Axmed Cabdullaahi Xasan oo ahaa 21 sano jir Somali-Canadian ahaa ayaa lagu diley Magaalada Toronto ee caasimada dalka Canada. War kasoo baxay Booliiska magaalada…
a’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Senator Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa qoraal soo dhigay Bartiisa Twitterka waxa uu ugaga digey burbur ku yimaad shirarka loogaga hadlayo arrimaha doorashooyinka. Cumar Cabdirashiid…
Xasan Sheikh: Madaxweyne Farmaajo colaadiisu waxay gaartay inuu ciidanka ilaalayda ah ka goosto mushaarkii iyo raashinkii.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda madaxweyne Farmaajo ay colaadin joogto ay ku haysay tan iyo sanadkii 2018, goortaas uu bilaabay inuu dhaliilo siyaasada dowladda.…